Florida bụ onye butere ọrịa, Hawaii bụ ebe njedebe njem nlegharị anya US kacha egbu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Florida bụ onye butere ọrịa, Hawaii bụ ebe njedebe njem nlegharị anya US kacha egbu
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • LGBTQ • News • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị njem na ọdụ ụgbọ elu Miami
Ụgbọ elu na -aga Florida na Hawaii jupụtara na họtelu na -eme ọfụma. Ahịrị n'ụlọ nri na -adịkarị. Onye ọbịa echefuru na ọ nọ n'ezie na COVID-19 mgbe ọ na-eleta Sunshine, ma ọ bụ Aloha Kọwaa n'oge a.
Florida nwere mgbasa COVID-19 kachasị ngwa ngwa na steeti ndị njem nlegharị anya taa nwere ikpe ọhụrụ 25991 ma ọ bụ ikpe 1210 kwa nde mmadụ. Mmadụ 27 nwụrụ ma ọ bụ 1.25 kwa nde
Hawaii bụ steeti ndị njem nlegharị anya US kacha egbu na mmadụ 4 nwụrụ ma ọ bụ 2.17 kwa nde. Hawaii dekọtara ikpe ọhụrụ 845 ma ọ bụ 584 kwa nde
Hawaii bụ a Ọchịchị Democratic, Florida a Steeti Republican.
Ọtụtụ nde ndị America na -asị EE maka ezumike,…. ma ugbu a?
N'ezie ọ nweghị nnukwu ihe dị iche na nje COVID ma ọ bụrụ na onye Republican ma ọ bụ onye gọvanọ Democratic na -elekọta steeti US.
Florida na Hawaii hụrụ ndị ọbịa n'anya ịnwụ?
Imepe steeti maka njem nlegharị anya nwere ike bụrụ usoro ga -emepe steeti ahụ ka ịdekọ ọrịa COVID dị elu. Florida ghe oghe maka njem, yana Hawaii, na -anabata ndị ọbịa aka.
92% nke ndị njem LGBT na US bụ ọgwụ mgbochi. Ọ dabara na steeti abụọ ahụ nwere omume enyi LGBTQ.
Steeti abụọ a na-agbarịta ibe ha asọmpi n'izu ole na ole gara aga banyere onye nwere ntiwapụ kachasị njọ na ikpe COVID-19 ọhụrụ, steeti abụọ ahụ jụrụ ịkpọ maka mmachi nwere ezi uche na ụlọ ọrụ ndị ọbịa na-enweta ego.
Ntụnyere a dabere na ọnụ ọgụgụ COVID 19 maka taa ọ bụghị oge ọrụ.
Ka oge na-aga, Hawaii nwere ọnụ ọgụgụ COViD-19 kacha ala na steeti ọ bụla. Ọnụọgụ ndị ahụ si na nke kacha ala ruo egwu mgbe agbanwere mmachi njem na ihe achọrọ na mbido ọnwa a.
Na Eprel 18, 2020, akwụkwọ a kọrọ gbasara Hawaii emechiri aỌnụ ọgụgụ ọrịa COVID -19 karịrị 100 n'otu ụbọchị. Naanị n'izu a Hawaii nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa ọhụrụ 1200 n'otu ụbọchị, njem na -agakwa n'ihu na -enwe mmachi mgbochi ọ bụla a na -ahụ anya.
Hawaii mepere ndị ọbịa ọgwụ mgbochi n'ọnwa a, yana ndị ọbịa nwere ule adịghị mma kemgbe Ọktoba 2020.
Ihe nkpuchi ihu ihu Hawaii na ihe ndọpụ uche mmadụ na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, na ntọala ime ụlọ ndị ọzọ, na COVID na -agbasa mgbe njem na -aga n'ihu.
Florida gbapụrụ n'izere ọtụtụ mgbochi, na -aga n'ihu na mgbasa ozi dị ka ebe njem dị mma, COVID na -agbakwa ọsọ.
Steeti abụọ ahụ Florida na Hawaii nwere otu, na mgbasa nke COVID dị oke elu n'oge a na-atụ ọtụtụ ndị obodo egwu izo n'ụlọ ha.
Ọ bụ ezie na Hawaii ka nwere akwa ụlọ ọgwụ zuru oke n'oge a, na Florida, a na -agbasa ụlọ ihe mberede na paseeji ugbua.
N'ime izu gara aga, Florida enweela ikpe COVID karịa steeti iri atọ niile nwere ọnụego ikpe kacha ala, jikọtara ọnụ.
Steeti abụọ a nwere ihe karịrị 50% nke ndị bi na ya ọgwụ mgbochi nke ọma, Steeti abụọ a makwa na ọnụọgụ ihe ize ndụ dị n'ogige a na -emeghị ọgwụ mgbochi.
Steeti abụọ a dịkwa mkpa ka akụ na ụba njem na -aga nke ọma wee merie 'tụlee mgbochi siri ike. Gọvanọ Hawaii Ige tinyere ụfọdụ mgbochi ihe atụ ọzọ. Ọ chọrọ ka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ nowụ ugbu a ree naanị 50% nke oghere ha.
Ebe ọ bụ na United States ka mechiri emechi maka ọtụtụ ndị njem mba ofesi, Steeti abụọ a na -adabere na ndị njem ụlọ. Ndị njem Europe na -efu efu na Florida, ebe ndị Japan na ndị Korea anaghịzi ahụ n'ụlọ nri, ụlọ ahịa, na osimiri Hawaii.
Njem nlegharị anya nke ime obodo na -akwụ ụgwọ maka mfu a ma na -abawanye ụba karịa ka ọ dị na mbụ.
N'ụzọ na -emegide onwe ya, Gọvanọ Ige na Hawaii gwara ndị njem nleta na ọ dịghị mkpa ime njem n'oge a, ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii na -agbalị ime njem na Hawaii ka ọ ghara iru ala. Ihe a niile ka dị na ntị ọnwụ.
Eziokwu sitere n'aka ndị isi na ndị njem anaghị emekọ ihe na ndị obodo bụ ihe ọchị, onye ọ bụla makwaara ya.
Hawaii na Florida bịara dịrị ibe ha nso mgbe ụgbọ elu Hawaiian iụgbọ elu na-akwụsịghị akwụsị site na Honolulu ruo Orlando.
Amabeghị "akụkọ ndị ọzọ". Ọ na -atụ egwu ọbụladị chee maka ihe ga -esi na ya pụta, ọ dị nwute na edeela ụfọdụ ahịrịokwu na mgbidi.
Chris ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 19, 2021 na 13:53
N'ebe a na Hawaii, imirikiti ikpe ọhụrụ na-agbasa n'etiti ezinụlọ na nnọkọ metụtara ndị njem. Ọ bụrụ na mgbasa ahụ bụ ebe ntụrụndụ ndị njem nlegharị anya, kama agbata obi anyị, a gaara emechi njem ọzọ na nkụchi obi. Anyị niile na -achọ ịtụ aka, mana anyị anaghị echebe onwe anyị maka na ọ dị mfe ịtụ ndị ọzọ aka
Joan Enriquez-Noguera ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 17, 2021 na 09:26
Ọ bụ maka ego .Hawaii chọrọ ego ahụ Kwụsị njem. Nọ n'ụlọ Hawaii na Florida kwesịrị imechi ụzọ ma hichaa omume ha, ọ na -ewute m na ndị bi na Hawaii ka a na -awakpo ha.
raymond dị ala ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 17, 2021 na 06:28
Paul ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 17, 2021 na 04:49
Mgbe nnwale kwụsịrị maka ndị gbara ọgwụ mgbochi Comimg na Hawaii, ikpe bidoro ịgba n'ime izu ole na ole ndị mmadụ ọgwụ mgbochi na -ebute ya n'ụlọ nri na ụlọ oriri na -ebelata ka 50% agaghị akwụsị ndị mmadụ iweta ya na ọ dị m mkpa ịnwale ha tupu ha abanye na Hawaii.